Blaogera Etiopiana manome voninahitra ilay mpitatitra an-gazety tao amin’ilay fiaramanidina nianjera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2018 2:50 GMT
( Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny May 2007)
Nofenoin'ireo blaogera Etiopiana fanomezam-boninahitra ho an'i Anthony Mitchell, ilay mpitatitra an-gazety tao amin'ny Associated Press, iray tamin'ireo olona 114 maty rehefa nianjera tao Kamerona atsimo ny fiaramanidina KQ50-n'ny Kenyan Airways ny Sabotsy 5 Mey vao maraina be. (Jereo ny tantara BBC mikasika ilay fianjerana sy ny fitetezan'ny Global Voices ireo fanehoankevitry ny blaogera Keniana manoloana ilay loza.)
Niasa toy ny mpanao gazety tao Etiopia nandritra ny dimy taona ary nitarika ilay fitaterana ny herisetra izay nipoaka taorian'ireo fifidianana nasionaly niteraka adihevitra be tamin'ny Mey 2005 i Anthony.
Noroahana tao amin'ilay firenena izy tamin'ny volana Janoary 2006 taorian'ny niampangan'ny fanjakana Etiopiana azy ho nanao tatitra ”feno fankahalàna”. Fa nijanona ho toy ny mahery fo izy ho an'ny Etiopiana maro, ao anatin'izany ireo bilaogera tena mpiondana politika maro be ao amin'ny firenena.
Ho ahy, izy no vahiny mpanao gazety tsara indrindra izay nipetraka tao Etiopia nandritra izay folo taona izay. Ankoatra ny filôzofiany amin'ny fanaovan-gazety, ho tsaroana ho toy ny mpanao gazety tena feno fahasahiana. Tsy mihevitra aho fa ho toy ireny ny tatitry ny AP mikasika an'i Etiopia, raha tsy tomponandraikitra mivantana na ankolaka tamin'ireny tantara ireny izy – tao Etiopia, niaina toy ny mpanao gazety ary tao Kenya, toy ny toniandahatsoratra,
hoy ny nosoratan'i Seminawork tao amin'ny Anthony Mitchell, mpanao gazety mahery fo.
”Tena fahaverezana lehibe ho an'i Etiopia sy Afrika amin'ny ankapobeny ny fahafatesan'i Anthony Mitchell, mpitatitra an-gazety tao amin'ny AP,” hoy i 4kilo tamin'ny volana May, hitahy ny fanahiny anie Andriamanitra!
”Tena namana akaiky an'i Etiopia ilay mpanao gazetin'ny AP, i Anthony Mitchel”, hoy ny Addis Voice tao anatin'ny Tribute to a true journalist. Fanomezana voninahitra ny tena mpanao gazety marina” Nandritra ny havesatry ny famoretana nialohan'ny fifidianana, tsy nanoratra na inona na inona hafa ankoatra ny marina i Anthony Mitchel, ny marina manontolo.”
”Tena namana akaiky an'i Etiopia sy ireo Etiopiana i Anthony Mitchell,” araka ny Carpe Diem Ethiopia ao amin'ny Anthony Mitchell: Mitazona ireo Mpampijaly Ho Tsara Toetra, ”maherifo eo an-toerana” araka ny The Other Side tao amin'ny Fianjerana Fiaramanidina tao Kamerona, ”mpanao gazety mamiratra” hoy i Ethan Zuckerman avy amin'ny Global Voices tao amin'ny Fanehoankevitra manoloana ilay fianjeran'ny KQ 507 ary ”mpanao gazety tena nanan-kaja sy misongadina” araka ny ust Thinking tao amin'ny Anthony Mitchell.
Na iray aza, tsy misy – raha ao Etiopia – tsy mahalala an'i Anthony! Nitarika nankany amin'ny fandroahana azy tao Etiopia tamin'ny 2006 ny fahaizana manakatra lalindalina kokoa ny politika ao Etiopia ary noho izany, ny tatitra nataony mikasika ny zava-mitranga tao amin'ny firenena. Fa nipetraka tao Nairobia, mbola nanohy ny fanarahany maso an'i Etiopia i Anthony ary mbola nitazona antsika rehetra – Etiopiana – sy izao tontolo izao hahafantatra ny momba ny firenentsika !
hoy i FilwehaPundit tao amin'ny We Missed a Great Man! (Namoy lehilahy goavana isika !)
Tena nankasitrahan'ireo mpitatitra an-gazety niaraka niasa taminy i Anthony Mitchell, indrindra ireo niaraka niasa taminy tao amin'ny biraon'ny Associated Press tao Nairobia izay niasany taorian'ny fandroahana azy.
Namela fanehoankevitra tao amin'ny faran'ny fidirana voalaza tetsy ambony an'ny Seminawirk i Les Neuhaus, ilay mpitatitra an-gazety nisolo azy tao Etiopia, milaza fa:
Nahatonga ahy ho mpitatitra an-gazety tsaratsara kokoa i Anthony Mitchell…Raha toa ka marina fa tena lasa tokoa izy, tena dona mafy ho an'ny fanaovan-gazety aty Afrika izany, ary manerana izao tontolo izao ihany koa. Tena nanao izay hahalafatra ny asany tao Etiopia izy ary tokony hirehareha amin'ny zavatra vitany tamin'ny fitaterana ny vaovao avy amin'ity firenena mandalo sarotra ity ireo Etiopiana. Tena dona mafy amiko ity rehefa mamaky ity vaovao mavesatra, tena mavesatra ity aho.
Nihaona tamin'i Anthony nandritra ny dia an-gazety nataony tao Djibouti, herinandro vitsy nialoha ilay fianjerana i Christopher Allbritton, mpanao gazety sy mpitoraka blaogy monina ao Beirut. Nanoratra izy tao amin'ny blaoginy Back to Iraq tao anatin'ny Anthony Mitchell avy ao amin'ny AP tao anatin'ilay fiaramanidina nianjera:
Tamin'ny volana Martsa tany Djibouti, nihaona tamin'i Anthony aho, 39 taona izy, rehefa samy nandeha tamin'ny FGS Bremen, sambo mpiady Alemana, hanoratra tantara momba ny hetsika fiarovana an-dranomasina tao amin'ny faritra. Tena nanana tantara maro ihany koa i Anthony, mahatsikaiky sy mamely ny tenany sy Afrika ihany, tantara izay tsy nisy fahendrena sarotra azo na kely aza. Niresaka mikasika ireo foko ao Somalia ihany koa izy, ny hetsiky ny tafika Amerikana ao amin'ny Tandrok'i Afrika ary tsy taaka nanao vazivazy tamin'ilay tafika mpiaro anay tamin'ny fomba tena natoraly araka izay azony natao.
Tany Nairobia no nahafantaran'ireo mpanoratra ao ambadiky ny Ethiopia Blog an’ny Ivontoerana Pulitzer, izay nifindràny monina rehefa voaroaka izy. Nanoratra izy ireo tao anatin'ny Anthony Mitchell:
Fony izahay tany Etiopia, herintaona mahery kely taorian'ny nandehanan'i Anthony, mbola niresaka mikasika ny fitaterany vaovao foana ny olona. Mazava ho azy fa be tsikera ireo nanana fifandraisana tamin'ny fanjakana; nilaza avokoa ny rehetra fa nanao zavatra hafa amboniny noho ireo mpanao gazety hafa izy mba hampahafantarana ny fanararaotana nataon'i Meles nandritra iny taona iny. Avy amin'ireo blaogera maro ao Etiopia izay mitomany ny fahafatesany ny fijoroana vavolombelona momba ny kalitaon'ny asany.
Niara-niasa tamin'i Anthony nandritra ny roa taona teo no eo aho tao Etiopia ary namaritra ny fihetsehampoko nanoloana ny fahafatesany tao anatin'ny Anthony Mitchell tao amin'ny blaogiko Meskel Square. Namintina toy izao ilay fampidirana:
Sarotra ny mieritreritra fanamarihana iray mba hamaranana azy ity. Mety ho adalàna no fahitan'i Anthony ny andrana rehetra hamoahana fihetsehampo na fihetsehampo miakoako be loatra. Ny zavatra farany tsara indrindra azoko lazaina dia tena lehilahy lehibe ary mpanao gazety tena mendri-kaja izy. Ary mba hilazana zavatra misongadina – hoe tena ravaravan'ny alahelo avokoa androany ireo olona rehetra nahafantatra azy tao Addis Abeba .